Yintoni i-WiFi Mesh? Izinto eziluncedo nezingalunganga | Iindaba zeGajethi
Yintoni i-WiFi Mesh? Izinto eziluncedo nezingalunganga
UJordi Gimenez | | Ikhaya
Izixhobo ezingakumbi nangakumbi zidityaniswe nenethiwekhi yeWiFi yendlu yethu, iPC yakho okanye ilaptop, i-smartphone, ithebhulethi, iwotshi efanelekileyo, umabonwakude wethu, iibhalbhu ezilumkileyo, iikhamera zokujonga, izithethi kunye uluhlu olude lwezixhobo esidityaniswe nenethiwekhi yethu yasekhaya ngerobhothi kwiimeko ezininzi engalinganiyo. Kwaye kuqhelekile ukuba zonke ezi zixhobo zidityaniswe ngqo kwezi imizila abaqhubi "banike" kwaye esele sitshilo kwasekuqaleni kwenqaku ukuba ayizizo ii-routers ezilungileyo konke konke.
Kungenxa yoko le nto abasebenzisi abaninzi bephela bekhetha ukuphindaphinda kwenethiwekhi ukwandisa umqondiso kuyo yonke indlu kwaye oku kulungile kwaye kubi, kuba ngesiqhelo ii-PLC eziqhelekileyo ayisosisombululo kwezi zinqamko okanye iingxaki zeempawu ezisezantsi kwizixhobo zethu, isisombululo sijolise ngqo I-WiFi Mesh uthungelwano okanye umnatha wonxibelelwano.
I-Linksys WHW0303B Velop ye-band-band ye-Wi-Fi inkqubo
Kodwa ngaphambi kokungena ngokupheleleyo kulo mbandela, siza kubona amanqaku aphambili kolu hlobo lwe-mesh okanye iinethiwekhi ze-WiFi Mesh ezikhoyo njengangoku phakathi kwabasebenzisi. Kubalulekile ukuba uthi ngezi zixhobo zisengumbane kumzila kunye nezinye iisathelayithi ezikwiindawo ezifanelekileyo zekhaya, eofisini okanye kwindawo apho ufuna ukwandisa ukogquma kunye nokunikezela Ukuphinda okwenyani kwenethiwekhi ye-WiFi. Ke ngoko, ukuba nekhaya elixhumeneyo kuthetha ukuba une-WiFi efanelekileyo kwaye olu hlobo lwesixhobo lunokuba lukhulu kuyo.
1 Yintoni kanye kanye inethiwekhi yeMesh?
2 Uzibeka njani iisathelayithi kwaye zingaphi ozibeka
3 Izinto eziluncedo zolu hlobo lokugubungela i-WiFi Mesh
4 Eyona nto iphambili kuthungelwano lweMesh
5 Ukukhethwa kweeMesh routers kuya kuxhomekeka kwizinto ezininzi
Yintoni kanye kanye inethiwekhi yeMesh?
Ngokusengqiqweni sijamelene nohlobo lonxibelelwano olusebenzayo, olunamandla nolukhuselekileyo kunokuba sifaka i-PLC kwiplagi yendlu yethu. Kule meko, into esinokuyithetha ngothungelwano lwe-Mesh kukuba malunga uthotho «imizila» ekwabizwa isathelayithi Yandisa umqondiso ngakumbi kumbulelo kwinethiwekhi yoqobo uqobo, ukubetha lo mqondiso ngandlela thile kwenza ukuba kube lula ukuthelekisa inethiwekhi yomgaqo wethu ophambili naphina endlwini yethu.
Kubandakanya ukudibanisa ezinye ii-routers kwezethu, isikhululo esiphakathi kunye nokuphindaphinda okunje ngesathelayithi esivumela ukuba sibenendawo yokugubungela ngaphandle kokulahleka naphina endlwini yethu. Konke oku kunxibelelene nomnye nomnye, oko kukuthi, ukuba sinesathelayithi ezimbini ezidityaniswe kumzila wethu ophambili into eyenziwa ngala maqela "kukuthetha" omnye komnye ukunikezela olona phawu lubalaseleyo kwizixhobo zethu ezixhumeneyo kwaye ngale ndlela kuncinci okanye akukho siginali ilahlekileyo kwi-router esembindini.
Yonke into idityanisiwe kunye kwaye ngale ndlela asinangxaki xa sihamba ekhaya kunye neLaptop okanye iselfowuni, njl.njl., Kuba izixhobo zeMesh zenza i-mesh efikelela kuzo zonke iindawo, yomeleza ukugubungela apho bayifuna khona ngokwenene. Isathelayithi nganye inoxanduva lokuhambisa inethiwekhi ngokuchanekileyo ukuze xa sihamba Masingabinangxaki yokugubungela i-WiFi.
INokia WiFi Beacon 3-Inkqubo yeMesh Router
Uzibeka njani iisathelayithi kwaye zingaphi ozibeka
Le yinto eya kuxhomekeka kakhulu kwikhaya lethu, eofisini okanye kwindawo apho sifuna ukusebenzisa olu hlobo lwesixhobo. Inyani yile ihlala ineesathelayithi ezimbalwa ingaphezulu kokwaneleyo Ukugubungela iimfuno zokugubungela, kodwa ke, oku kuhlala kuxhomekeke kubukhulu bendlu yethu, izityalo ezinazo okanye iindawo apho sine-router ephambili kunye nabanye abaphindayo.
Kungenxa yoko le nto ihlala ilungile cetyiswa ngumntu osele elisebenzisa olu hlobo lwesixhobo okanye njengoko sisitsho namhlanje: bukela iividiyo kwiYouTube. Kwelinye icala, izixhobo zeMesh ngokwazo zibonelela ngokulula nangokukhawulezayo, akukho mfuneko yokuba ube yingcali kuyo, ezinye iisathelayithi zinikezela ngezibane ze-LED kuzo ukuze zibone amandla esignali kwaye kufuneka sizibeke ngendlela yokuba bafumana ubuninzi, ukujika, ukutshintsha indawo okanye nokuziqhelanisa nezi zixhobo.
Amanyathelo e Unxibelelwano lwezi zendlela lulula:
Sidibanisa umzila ophambili kwi-router yomboneleli wethu we-intanethi
Sifakela ezinye iisathelayithi kwiindawo ezicwangcisiweyo ukwenzela ukuba ubuninzi bugutyungelwe
Singena kwisicelo somenzi kwifowuni ephathwayo okanye kwikhompyuter ukuyilungisa
Ayizizo zonke iividiyo esizifumana kuthungelwano lwentlalo yeYouTube ekuchazeni ukuba zisebenza njani ezi ntlobo zezixhobo, kufuneka sazi ukwahlula kakuhle kwaye sisebenzise ezo sizibonayo ziyazi ngokwenyani ukuba zithetha ngantoni. Apha ngezantsi sikushiya ividiyo yoogxa bethu kwiiNdaba ze-iPhone kwenye yezi ndlela zeMesh:
Ikhaya le-Ubiquiti Amplifi ...
Izinto eziluncedo zolu hlobo lokugubungela i-WiFi Mesh
Njengoko kubonakala, yonke into inezibonelelo zayo kunye nezinto ezingalunganga, kodwa ngoku siza kubona izibonelelo. Ngale ndlela, eyona nto ilunge kakhulu kukuba xa sele sinazo zonke iisathelayithi zisasazwe kakuhle, singasasaza inethiwekhi yethu ye-WiFi ekhaya zombini i-2,4 kunye ne-5GHz band. Iyahambelana neWiFi ac ke kule ngqondo asiyi kuba nangxaki.
Esinye isitshixo kuthungelwano lweMesh yile ngoku ungabeka zonke iinombolo ozifunayo, uya kuhlala unenethiwekhi enye oza kuthi uqhagamshele kuyo naphina apho usekhaya. Ngaphandle kwento yokuba uninzi lweemveliso oza kuzifumana kwintengiso zineenkcukacha eziphambili kakhulu ezinje ngokuhambelana ne-WiFi-ac kunye nebhendi emibini ngaxeshanye (2,4 kunye ne5GHz), ngokwenza oko uya kubona inethiwekhi enye apho bonke baya kuthi qhagamshela iikhompyuter zakho, ii-smartphones, iitafile, njl njl kwaye zilungile, zilungile kakhulu.
Abavelisi basinika izixhobo zonxibelelwano kwezi zixhobo kwaye ngexeshana elifutshane ngaphandle kwesidingo sokuba ziingcali sinokuba nokugubungela i-WiFi iyonke ekhayeni lethu kwaye yintoni ebhetele, Akukho lahleko kwiindawo apho besingenayo ingxelo ngaphambili.
INetgear Orbi RBK23-Inkqubo yeMesh WiFi
Eyona nto iphambili kuthungelwano lweMesh
Asinakuthi yonke into iluncedo ngolu hlobo lwesixhobo, kude nayo kwaye into yokuqala esiza kujonga kakubi kuyo Ixabiso lezi zixhobo zeMesh. Okwangoku sidibana neemveliso ezininzi ngamaxabiso awahlukeneyo kwaye nangona amaxabiso aso esihla kancinci, ayizizo iimveliso ezingabizi kakhulu ukuba zingatsho. Umqobo wexabiso uya kuxhomekeka kwizinto ezininzi kwaye enye yazo linani leesathelayithi esifuna ukuzisebenzisa kwaye enye ikumgangatho wemveliso kunye nophawu.
Kwakhona Iingxaki zokugubungela i-WiFi azihlali zisonjululwa I-100% inolu hlobo lwesixhobo. Kuyinyani ukuba kwiimeko ezininzi kuyakusisebenzela ukuhlangabezana neemfuno zethu, kodwa kumaxesha apho kukho iindonga ezishinyeneyo ekufuneka sidlulile kuzo, izityalo ezininzi eziphakamileyo, ukuphazamiseka kwamaza ombane amaninzi okanye umgama omde wokugubungela, ezi zixhobo zeMesh zinokuthi azisebenzi kakuhle.
Kuyinyani ukuba sineemodeli ezininzi kunye neempawu ezikhoyo namhlanje kwaye zininzi ngakumbi nangakumbi, abavelisi bezisombululo ezigqibeleleyo kwezi ntlobo zeemveliso kodwa ngekhe zihlale zixhomekeke kuhlahlo-lwabiwo mali lwethu kwaye sifuna ukwenza utyalo-mali kuyo.
Ukukhethwa kweeMesh routers kuya kuxhomekeka kwizinto ezininzi
Thina siyakushiya izixhobo ezahlukeneyo zeMesh kwinqaku idityanisiwe ukuze ubone ezinye iindlela kwaye ukhethe eyona uyithandayo okanye inokuba ilungile kwityala lakho, ngokucacileyo kuya kuxhomekeka kwizinto ezininzi zihlala zithathela ingqalelo uhlahlo-lwabiwo mali kunye nendawo ekufuneka siyigubungele.
Okucacileyo kukuba kwiimeko ezininzi la maqela asebenza kwaye asebenza kakuhle kakhulu ukufumana ingxelo kuzo zonke iimbombo zekhaya lethu, emsebenzini, njl. konke ngaphandle kokulahlekelwa ngumqondiso okanye amandla yobunzima.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Yintoni i-WiFi Mesh? Izinto eziluncedo nezingalunganga
I-Huawei MediaPad M6: Uphengululo lwethebhulethi enokuthethwa kakhulu